Lewy body dementia (လူဝီရူးသွပ်ရောဂါ) - Hello Sayarwon
Lewy body dementia (လူဝီရူးသွပ်ရောဂါ)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Lewy body dementia (လူဝီရူးသွပ်ရောဂါ)
Lewy body dementia (လူဝီရူးသွပ်ရောဂါ) ကဘာလဲ။
အတိတ်မေ့ခြင်းရူးသွပ်ခြင်းဖြစ်ပြီးနေက် ဒုတိယအဖြစ်အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ လူဝီအစိုင်အခဲများကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ရူးသွပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ လူဝီလို့ခေါ်တဲ့ပရိုတိန်းအစိုင်အခဲလေးတွေက တွေးခေါ်ခြင်း၊ မှတ်ဉာဏ်၊ နဲ့ ရွေ့လျားမှုတွေမှာပါတဲ့ဦးနှောက်အစိတ်အပိုင်းနေရာတွေမှာရှိတဲ့ အာရုံကြောတွေထဲမှာ ကြီးထွားနေရာယူလာကြပါတယ်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်နိုင်ရည်တွေတွေ တဖြစည်းဖြည်းကျဆင်းလာစေပါတယ်။ အမြင်ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ခြင်း၊နဲ့ တက်ကြွမှုအာရုံစူးစိုက်မှုတွေမှာ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ကြွက်သားများတောင့်တင်ခြင်း၊ ရွေ့လျားမှုလှုပ်ရှားမှုနှေးကွေးခြင်းနဲ့ လက်ခြေတုန်ခြင်းစတဲ့ ပါကင်ဆန်လက္ခဏာတွေလည်း ပြနိုင်ပါတယ်။
Lewy body dementia (လူဝီရူးသွပ်ရောဂါ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ဒီရောဂါဟာ အလွန်အဖြစ်များပါတယ်။ ဒိရောဂါထက်ပိုအဖြစ်များတာကတော့ ရူးသွပ်ခြင်းရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ သတိမေ့ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Lewy body dementia (လူဝီရူးသွပ်ရောဂါ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
လူဝီရူးသွပ်ရောဂါ ရဲ့ အဖြစ်အများဆုံးရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့
ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ခြင်းက ပထမဆုံးစပေါ်တတ်တဲ့လက္ခဏာတွေထဲက တစ်ခုစြဖ်ပြီး မကြာခဏပြန်ပြန်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အမှန်တကယ်မရှိတဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်တွေ၊ တိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ လူတွေကို မြင်ယောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အသံ၊ အနံနဲ့ အတွေ့အထိပိုင်းဆိုင်ရာ ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
လှုပ်ရှားလုပ်ကိုင်နိုင်မှုဆိုင်ရာ ပြဿနာရှိခြင်း – လှုပ်ရှားမှုနှေးကွေးခြင်း၊ ကြွက်သားများတောင့်တင်ြးခင်း၊ နဲ့ ခြေလက်တုန်ခြင်း လမ်းလျှပ်တိုက်လျှောက်ခြင်းစတဲ့ ပါကင်ဆန်ရောဂါလက္ခဏာများတွေကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။
သွေးပေါ်င်ချိန်၊ သွေးခုန်နှုန်း၊ ချွေးထွက်ခြင်းနဲ့ အစာချေခြင်းဖြစ်စဉ်တွေကို အာရုံကြောအဖွဲ့အစည်းရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းက အုပ်ချုပ်ပေးပါတယ်။ ဒီရောဂါက ဒီအစိတ်အပိုင်းတွေကို မကြာခဏသက်ရောက်လေ့ရှိတာကြောင့် မူးဝေခြင်း၊ မေ့လဲခြင်းနဲ့ ဝမ်းချုပ်ခြင်းကဲ့သို့ဝမ်းဗိုက်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေ ရလာနိုင်ပါတယ်။
မှတ်ဉာဏ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ = မရေမရာဖြစ်ခြင်း၊ အာရုံစူးစိုက်မှုနည်းခြင်း၊ အမြင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများနဲ့ မှတ်ဉာဏ်ပိုင်းဆုံးရှုံးမှုကဲ့သို့သော အယ်ဇိုင်းမားရောဂါအလားတူ လက္ခဏာတွေကို ပြနိုင်ပါတယ်။
အိပ်စက်ခြင်းဆိုငရာ်အခက်အခဲများ– အာအီအမ်အိပ်စက်ခြင်းပြဿနာက အိပ်ပျော်နေစဉ် အိပ်မက်ထဲကအတိုင်း ပြင်ပမှာလိုက်လုပ်မိခြင်းကို ဖြစ်စေပါတယ်။
အိပ်ချင်ငိုက်မြည်းခြင်း၊ ငေးမောတွေးဝေနေခြင်း၊ နေ့အချိန်အတွင်း အတော်ကြာငိုက်မျည်းနေခြင်း စကားပြောရာတွင် တောင်စဉ်ရေမရပြောခြင်း တွေဖြဖစ်နိုင်ပါတယ်။
စိတ်ဓါတ်ကျခြင်း- နေမကောင်းဖြစ်နေစဉ်အတွင်းစိတ်ဓါတ်ကျဝေဒနာကိုလည်း ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
Lewy body dementia (လူဝီရူးသွပ်ရောဂါ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
လူဝီရူးသွပ်ခြင်းရောဂါက ဦးနှေက်ဆဲလ်တွေအတွင်း ပရိုတိန်းအစိုင်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်လာတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပုံမှန်မဟတ်ုတဲ့အစိုင်အခဲလေးတွေကို လူဝီအစိုင်အခဲလေးတွေလို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒီအတုံးအခဲလေးတွေကို ပါက်င်ဆန်ရောဂါမှာလည်း တွေ့နိုင်ပြီး စဉ်းစားတွေးခေါ်ခြင်း၊ အမြင်အာရုံနဲ့ ကြွက်သားများလှုပ်ရှားမှုစတဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအတွက် တာဝန်ယူထားရတဲံ ဦးနှောက်အစိတ်အပိုင်းတွေမှာ စုပုံလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဘာကြောင့် စုပုံဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာနဲ့ ဦးနေျာကိုကို ဘယလိုထိခိုက်စေတယ်ဆိုတာကို တိတိကျကျရှင်းရှင်းလင်းလင်းမပြောနိုင်သေးပါဘူး။ ဦးနှာက်ဆဲလ်တွေကြား သတင်းပို့ဆောင်ခြင်းကို အဟန့်အထားဖြစ်စေခြင်းဖြင့် ဦးနှောက်ရဲ့ပုံမှန်လုပ်ငန်းတွေကို သက်ရောက်စေခြင်းကြောင့်လည်း တစ်စိတ်တစ်ဒေသပါဝင်ပါတယ်။
မိသားစုထဲမှာဖြစ်ဖူးခြင်းမရှိပဲနဲ့လည်း အဖြစ်များလေ့ရှိပါတယ်။ မျိုးရိုးလိုက်တာကတော့ အင်မတန်ရှားပါတယ်။
Lewy body dementia (လူဝီရူးသွပ်ရောဂါ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်မားစေတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကတော့ အများကြီးရှိပါတယ်။
လူဝီရူးသွပ်ရောဂါသို့ ပါကင်ဆန်ရောဂါမိသားစုတွင်း ဖြစ်ဖူးခြင်း
Lewy body dementia (လူဝီရူးသွပ်ရောဂါ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဒီရောဂါအတွက် စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းနည်းလမ်းတစ်ခုတည်းနဲ့တော့ မလုံလောက်ပါဘူး။
မေးခွန်းများတာဝန်များပေးပြီး စိတ်ပိုင်းအတွေးအခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်နိုင်ရည်ကိုစစ်ဆေးခြင်း
အလားတူရောဂါတွေရဲ့လက္ခဏာတွေကို ကွဲကွဲပြားပြားခွဲနိုင်ဖို့ သွေးစစ်အဖြေရှာခြင်း
အမ်အာအိုင်၊ စီတီ၊ အက်စ်ပီအီးစီတီစသဖြင့် ဦးနှောက်စကန်ဖတ်ခြင်းတွေကနေ ရူးသွပ်ရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့ ဦးနှောက်ရဲ့အခြားပြဿနာတွေကိုပါသိနိုင်ပါတယ်။
Lewy body dementia (လူဝီရူးသွပ်ရောဂါ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
လတ်တလောမှာတော့ ဒီရောဂါကိုပျောက်ကင်းအောင် ရောဂါသက်သာအောင်နည်းပါးောအင် ကုသနိုင်မှုမရှိသေးပါဘူး။
လက္ခဏာအချို့ကိုသက်သာစေနုငိတဲ့ကုထုံးတွေတော့ ရှီပေမယ့် နှစ်နဲ့ချီကြာနိုင်ပါတယ်။
ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ခြင်း၊ မရေမရာဖြစ်ခြင်း၊ အိပ်ချင်ငိုက်မြည်းခြင်း၊ ရွေ့လျားလှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာပြဿနာများနဲ့ ကောင်းကောင်းအိပ်စက်မရခြင်းတွေကို သက်သာစေတဲ့ဆေးများ
ဇီဝကမ္မကုထုံးများ၊ အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာကုထုံးများ၊ လှုပ်ရှားမှုပြဿနာများအတွက် စကားပြောနဲ့ဘာသာစကားဆိုင်ရာကုထုံးများ၊ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံစေခြင်း စတဲ့ကုထုံးများ
စိတ်ဝေဒနာ်ဆိုင်ရာ ကုထုံးများ ( မှတ်ဉာဏ်၊ ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းနဲ့ ဘာသာစကားဆိုင်ရာစွမ်းရည်တွေ တိုးတက်ဖို့အတွက် ရည်ရွယ်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းများ ဆောင်ရွက်မှုများ)
အားပေးကူညီမှုနဲ့ အကြံဉာဏ်များရရှိစေဖို့အတွက် မှတ်ဉာဏပိုင်းပြဿနာရှိတဲ့လူနာတွေကို အစည်းအဝေးများကျင်းပပေးခြင်း ။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက လူဝီရူးသွပ်ရောဂါ ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် လူဝီရူးသွပ်ရောဂါကို
ကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
လိုအပ်မယ်ဆိုရင် သူငယ်ချင်းတွေမိတ်တွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ မိသားစုဝင်တွေကို အကူအညီတောင်းပါ။ အိမ်တွင်းကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေက အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
ရောဂါအကြောင်း သိနိုင်သလောက် လေ့လာခြင်း- ဆရာဝန်တွေ၊ လူမှုရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ စောင့်ရှော်ကရေးအသင်းအဖွဲပဆတွေကို မေးခွန်းများနေမးခြင်း
အားပေးကူညီသည့်အသင်းအဖွဲ့များနဲ့ ဆက်သွယ်ခြင်း – သင်က လူဝီရူးသွပ်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီး စောင့်ရှေက်မှုပေးနေရသူဆိုရင် လူနာသတိမေ့သတိလစ်ခြင်းရှိမရှိ ဆေးတွေအပေါ်ဆိုးဆိုးရွားရွားတုန့်ပြန်ခြင်းရှီမရှိ သေချာအောင် အနီးကပ်စောင့်ကြည့်သင့်ပါတယ်။ မေရေမရာဖြစ်ခြင်း၊ ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ခြင်း စြဖ်နေချိန်တွေမှာ သံသယကိုပျောက်စေအောင်လည်း ကူညီပေးသင့်ပါတယ်။
မျက်လုံးချင်းဆုံပြီး စကားကိုရှင်းရှင်းနှေးနှေးပြောပါ။ လူနာရဲ့တုန့်ပြန်မှုကို မချေပပါနဲ့။ တစ်ချိန်မှာ စိတ်ကူးတစ်ခုကိုပဲ ပြောဆိုဆွေးနွေးပါ။ အရာဝတ္ထုတွေဆီညွှန်ပြပေးခြင်းစတဲ့ ခြေလက်အမူအရာပြခြင်း၊ အရိပ်အမြွက်ပေးခြင်းတွေကို အသုံးပြုပါ။
အားကစားလေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူေးတွက ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်နိုင်ရည်တက်လာခြင်း၊ အမူအကျင့်များနဲ့ စိတ်ဓါ်တ်ကျလက္ခဏာများ သက်သာတိုးတက်လာခြင်းတွေ စြဖ်နိုင်ပါတယ်။ အချို့လေ့လာမှုတွေက လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ဒီရောဂါသည်တွေမှာ မှတ်ဉာဏ်ပိုင်းဆေိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုကို နှေးသွားစေနိုင်ပါတယ်။
ဂိမ်းများ၊ ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိမာ်းနဲ့ စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်စွမ်းကိုအသုံးချရတဲ့ အခြားလုပ်ဆောင်မှုတွေက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနိမ့်ကျခြင်းကို နှေ်းစေပါတယ်။
အမူအကျင့်ဆိုင်ရာပြဿနာတွေက ညဘက်မှာပိုဆိုးလာတတ်ပါတယ်။ စိတ်အနှောင့်အယှက်ကင်းကင်း တီဗီကြည့်ခိုင်းခြ်ငး၊ ညစာရှင်းလင်းသိမ်းဆည်းခုငိးခြင်းနဲ့ မိသားစုဝင်တွေနဲ့တက်တက်ကြွကြွရှိနေစေခြင်းစသဖြင့် စိတ်ကိုတည်ငြိစေတဲံညဘက်အလေ့အထတွေကို ဖန်တီေးပးပါ။ မျက်စိလည်လမ်းပျောက်ခြင်းမဖြစ်ဖို့အတွက် ညမီးများထွန်းပေးထားပါ။
(Learn about Lewy body dementia. What are the symptoms, the causes and how to treat this condition? What can we do to cope and prevent its symptoms?)